Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရိုဟင်ဂျာ၊ အနောက်ကမ္ဘာ၏ ပစ်ဖဲနှင့် မြန်မာအတွက် Sensitive Area မောင်တော
ကျနော့်ရင်တွေပူနေပါတယ်။ ကျနော်အခု ထိုင်နေသောနေရာတွင် အေးစက်နေသော မိုးရေများ ကျဆင်းနေပါသည်။ သို့သော် မိုင်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ ဝေးသော အမိမြန်မာနိုင်ငံမှ ရခိုင်ဒေသအတွက် အများကြီးစိတ်ပူနေပါသည်။
ဘင်္ဂလားများဘာကြောင့် ဒီလို ထကြွသောင်းကျန်းရသနည်း။ အသတ်ခံရသော မွတ်စလင်ဆယ်ဦးကိုယ်စား မကျေနပ်၍ လား။ ကျနော်ကတော့ ဤမျှ ရိုးစင်းမည်မထင်ပါ။
ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလား စစ်ရေးဖိုရမ်များတွင် သူရို့ဆွေးနွေးကြလေ၏။ မြန်မာပြည်လူဦးရေက ဘင်္ဂလားထက်သုံးဆနည်း၍ အကျယ်အဝန်းက သုံးဆပိုကြီးသည်။ ထိုအနေအထားက မက်လောက်စရာ ဖြစ်သည်။ တကယ့်တကယ် တိုင်းပြည်တခု သည် စိုက်ပျိုးစရာမြေမရှိလျှင် မလွယ်လှ။ ငွေမည်မျှပင်ရှိစေကာမူ ရေရှည်တွင် အခြားနိုင်ငံများမှ အစားအသောက်ဝယ် ယူနေရပါက ကီးမကိုက်လှချေ။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများပြားကြွယ်ဝသော မြန်မာပြည်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အစိုးရကြောင့် ပစ်ပယ်ခြင်းခံထားရသော မြန်မာပြည်၊ ပြည်တွင်းစစ်မီးလျှံများ၊ ဆန္ဒပြပွဲများဖြင့် အချိန်ပြည့် ဗဟိုအုပ်ချုပ် ရေးကို စိန်ခေါ်ခြင်းခံနေရသော မြန်မာပြည်အတွက် ရခိုင်နယ်ကို ကျူးကျော်ရေးသည် ထိုသူတို့အတွက် စိတ်အေးလက် အေး အကွက်ချခဲ့ဖို့ အချိန်ရပေမည်။ ထိုသို့အကွက်အကွင်းများထဲမှ ယနေ့ မီဒီယာများကို ကြိုးကိုင်နေခြင်း နောက်ကွယ် အကြောင်းများကို ဉာဏ်မီသလောက် တွေးတောကြည့်မိလေသည်။
ထိုအခါ ပထမဆုံး မိမိအတွေးထဲ ဝင်လာသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင်ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယနေ့ ကြီး ထွားဆဲပါဝါများဟု တင်စားကြသော တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့အကြားတွင် တည်ရှိနေပြီး အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်ပေးထားသည့် လမ်းဆုံလမ်းခွသဖွယ် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်သည် ကြီးမားကျယ်ပြောလှသော တရုတ်ဈေးကွက် ကြီးကို လက်ဦးမှုရယူရန် မြန်မာသို့ အရင်ဝင်လာခဲ့သည်ဟု သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးက ဆို၏။ ထိုသို့ပထဝီဝင်အရ အရေးပါလှသော မြန်မာနိုင်ငံသည် ယနေ့ ပါဝါအပြောင်းအရွှေ့ခေတ်ကြီး (ဝါ) အမေရိကားလွန်ခေတ် (Post American World)တွင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏ ထိပ်တန်း ဒေသတခု ဖြစ်လာနေပေသည်။ ထိုဒေသအား နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ လွှမ်းမိုးမှု၊ လက်ဦးမှု ရယူထားနိုင်ခြင်းသည် ယခုရာစုနှစ်၏ အနာဂါတ်မဟာဗျူဟာ မဖြစ်နိုင်သလောဟု မေး လျှင် မည်သူမျှ ယတိပြတ်ငြင်းနိုင်မည်မထင်ပေ။
အဓိက ကျသော အချက်တစ်ချက်မှာကား တရုတ်၏ လက်ကုန်မဟုတ်သေးသော ဖွံ့ဖြိုးမှုပင်တည်း။ တရုတ်၏ အတိုင်း အဆမဲ့ ကြီးထွားလာနေသော စီးပွားရေးအင်အားနှင့် တိုးချဲ့လာနေသော စစ်ရေးအင်အားတို့က အမေရိကန် ပေါ်လစီ မဂ္ဂဇင်းများတွင် နေ့စဉ်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံများကို မြည်နေစေသည်။ Mixed Economy ဟုဆိုသော်လည်း အ နောက်ကမ္ဘာများနှင့် ကမ္ဘာ့ရန် ဆိုဗီယက်ကြီးနှင့် အလွမ်းသင့်နေဆဲ တရုတ်သည် အနောက်၏ ယနေ့နံပတ်တစ် ရန်သူ ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ယနေ့အခင်းအကျင်းများကို တီးခေါက်သူအများစု သတိမူမိကြပေမည်။
နိုင်ငံတခုတွင်၊ အထူးသဖြင့် စက်မှုနိုင်ငံများတွင် စွမ်းအင်သည် အသက်သွေးကြောဖြစ်၏။ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးအတွက် စစ် ပွဲများပင် ဖြစ်ကြရသည်။ ထို့ထက်ဆိုရလျှင်ယနေ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းများသည် စွမ်းအင်ဖူလုံရေးနှင့် ဆက်စပ်သော အ ခင်းအကျင်းများ ဖြစ်နေကြကြောင်းမှာ အထူးငြင်းစရာလိုမည်မထင်ပါ။ ထိုအခါ တရုတ်အား ထိန်းချုပ်ရန် သူ၏ စွမ်းအင် စီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံကြည့်ဖို့လိုလာလေသည်။ ယနေ့တရုတ်ပြည်ကြီးသည် ကမ္ဘာတွင်လောင်စာဆီ ထုတ် လုပ်သူများအနက် ကြီးကြီးမားမား ထုတ်နိုင်သူဖြစ်သော်လည်း ၁၉၉ဝ ခုနှစ်မှစ၍ သူ၏ လောင်စာဆီ ပြည်တွင်းသို့တင်ပို့ နှုန်း မြင့်မားလာခဲ့သည်။ ဤတွင် တရုတ်ပြည်၏ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးအတွက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်တွင် သူ၏ လောင်စာ ဆီတင် သင်္ဘောများလွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ရရှိရေးအတွက် ရေတပ်အင်အားတိုးချဲ့လာခဲ့သည်ကို သိသိသာသာတွေ့ ရပေမည်။ ထိုသို့ရေတပ်များ တိုးချဲ့ရလာခြင်းသည် အမေရိကန်၏ သြစတေးလျနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းတို့်ကို သိသာစွာ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါသည်။
တရုတ်၏ ရေနံတင်သင်္ဘောများကို စစ်ေ၇းအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံရနိုင်သော ပွိင့်မှာ မလက္ကာရေလက်ကြားဖြစ်သည်။ ထိုအန္တရာယ်ကို ရှောင်ကွင်းရန် တရုတ်သည် ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းလေးခုကို စဉ်းစားရပါတော့သည်။ ထိုအထဲတွင် မြန်မာ နိုင်ငံကို ခါးလည်မှ ဖြတ်သန်းသွားသော ကူမင်း-ကျောက်ဖြူ ရေနံပိုက်လိုင်း သည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံ ကိန်းလေးခုအတွင်းတွင် မြန်မာသည်ကား တရုတ်နှင့် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှု အနည်းဆုံးဟုပင်ဆို၍ ရနိုင်သည်။ထိုပိုက်လိုင်း သည် ရခိုင်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကုဗမီတာ ၁၂ သန်းကို တင်ပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ထိုပိုက်လိုင်းသည် ယနေ့ အရေးအခင်းဖြစ်သော ကျောက်ဖြူမြို့အနီးတွင် ရှိလေသည်။
ချုပ်ရလျှင် ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း ပိုက်လိုင်းကို မလုပ်ဖြစ်ရန် သို့မဟုတ် မြန်မာအစိုးရအပေါ် Bilateral Policy ဖြင့် အမေရိ ကန် သွားနေစဉ် အမေရိကန်က မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၏ Vitality (သေရေးရှင်ရေး အရေးပါမှု) အပေါ် အ မြတ်ထုတ်ကာ တရုတ်ကို နားရင်းအုပ်ရန် ရိုဟင်ဂျာကို ပစ်ဖဲခေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့အတွက် အစားခံရသော် လည်း အရေးမကြီးသည့် နယ်ရုပ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် လုံခြုံရေးတံ တိုင်းမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအနေဖြင့် ထိုကိစ္စကို ဒေသတွင်းဖြစ်စဉ် သက် သက်သာမက၊ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှု ဖြစ်စဉ်များအထိပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်စေလိုသည်။ ရိုဟင်ဂျာသည် အ မေရိကန်နှင့် အင်္ဂလန်မွေးသော မျောက်ဖြစ်လာပါစေဦး.. သူတို့အတွက် အနေသာကြီးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို လေး လေးနက်နက် ဆင်ခြင်စေလိုသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:22
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရိုဟင်ဂျာ၊ အနောက်ကမ္ဘာ၏ ပစ်ဖဲနှင့် မြန်မာအတွက် Sensitive Area မောင်တော . All Rights Reserved